जब इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ यदि तपाईं स्क्रीनशट लिनुभयो भने 🥇 अनुयायीहरू ▷ 🥇
जब इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ यदि तपाईं स्क्रीनशट लिनुभयो भने
के तपाईंलाई यस्तो भएको छैन कि कहिलेकाँही तपाईंले रमाईलो कुरा देख्नुभयो जुन तपाईं अरू कसैलाई देखाउन चाहानुहुन्छ? पोष्टहरू र कुराकानीहरू बचत गर्नको लागि सरल विकल्पहरू मध्ये एक स्क्रीनशट हो। जे होस्, यो कुनै रमाईलो थिएन कि तपाईंले कब्जा गरेको सामग्रीका लेखकहरूले तपाईंले एक बनाएको पत्ता लगाउनेछ। तब ठूलो प्रश्न यो हो,जब इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ यदि तपाईं स्क्रीनशट लिनुभयो भने? हामी यसलाई तल तपाईलाई व्याख्या गर्नेछौं।
कसैको लागि कुनै रहस्य छैन इन्स्टाग्राम यो प्लेटफर्ममा नयाँ उपकरण र सुविधाहरू ल्याउँदै, लगातार अपडेट गरिएको छ। यो त्यस्तै हो, जुन 2018 बर्षदेखि हो जब इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ यदि तपाईं स्क्रीनशट लिनुभयो भने वा स्क्रीनशटहरू। यद्यपि उनले पछि त्यो निर्णय फिर्ता लिए र कसैको स्क्रिनसट बनाउँदा प्रयोगकर्तालाई सूचना दिन रोक्ने निर्णय गरे। त्यसैले चिन्ता नलिनुहोस्, यो जान्न त्यति सजीलो छैन कि तपाईंले केहि सामग्रीको स्क्रिनसट बनाउनु भएको छ।
इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ कहिले तपाईं स्क्रीनशट लिनुभयो भने ?: स्क्रीनशट
मुख्य कुरा भनेको एक स्क्रिनशट वा स्क्रीनशट के हो भनेर जान्नु हो। निस्सन्देह, यो आज बुझ्न गाह्रो कुरा छैन। एक स्क्रीनशट केवल एक फोटो वा छवि हो जुन स्मार्टफोन वा कम्प्यूटरबाट लिन सकिन्छ। यस छविमा तपाईले ती तत्वहरू अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईको रूचि कैद गरिएको छ, र साथ साथै फोटो बनाउने सबै चीज।
सामान्यतया, स्क्रीनशटहरू फोटो वा कुराकानीहरू बचत गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन प्रयोगकर्ताहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ। जे होस्, यसको एक नकारात्मक पक्ष छ, जुन यो छ कि छवि गुणवत्ता मूल फोटोग्राफर भन्दा कम हुनेछ। जब सामाजिक नेटवर्क प्रयोगकर्ताहरू फेला पर्‍यो जब इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ यदि तपाईं स्क्रीनशट लिनुभयो भने, थोरै प्रयोग भएको थियो। जे होस्, हामी पहिले नै जान्दछौं कि प्लेटफर्मले यस सुविधालाई हटायो।
अब शुरूदेखि यो कहिले थाहा थिएन कि यो नयाँ इन्स्टाग्राम प्रकार्य कसरी ह्यान्डल गरियो। यसको कारणले गर्दा धेरै प्रयोगकर्ताहरू अचम्मित भए जब इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ यदि तपाईं स्क्रीनशट लिनुभयो भने। सत्य यो हो कि यो नयाँ सुविधा सबैले प्राप्त गरेनन, तर केवल केही प्रयोगकर्ताहरूको लागि मात्र काम गर्‍यो। सबैले सोचे जस्तो विपरीत, जब इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ यदि तपाईं स्क्रीनशट लिनुभयो भने यो विशेष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुन्छ। त्यो हो, यो सुविधा निजी सन्देशहरूमा बनाइएको स्क्रीनशटहरूको चेतावनी दिन मात्र काम गर्दछ।
हामीले उल्लेख गरिसकेका छौं, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले सामाजिक नेटवर्कको कार्यप्रतिको असन्तुष्टि देखाए; यद्यपि यो मात्र भयो जब इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ यदि तपाईं स्क्रीनशट लिनुभयो भने। अब, सबैलाई थाहा छ, प्रस्तुत धेरै गुनासोहरूको कारण, इन्स्टाग्रामले यो समारोह समाप्त गर्ने निर्णय गर्यो।
तपाईलाई जान्न रुची हुन सक्छ: इन्स्टाग्राम प्रत्यक्ष कहाँ छ?
इन्स्टाग्राममा स्क्रिनशटहरू कसरी लिने?
स्क्रिनशट वा स्क्रिनसट लिदा तपाईले दिमागमा राख्नुपर्ने पहिलो कुरा तपाईसँग कस्तो प्रकारको मोबाइल छ भनेर जान्नु हो; यो आदेशहरूमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईंलाई यो प्रदर्शन गर्न अनुमति दिँदछ। तसर्थ, यस लेख को माध्यम बाट हामी तपाईलाई बिभिन्न उपकरणहरुमा स्क्रीनशटहरु को बारे मा जान्नु पर्ने सबै देखाउनको लक्ष्य राख्दछौं।
सम्मानको साथ उत्पन्न भएको हलचलको कारण जब इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ यदि तपाईं स्क्रीनशट लिनुभयो भनेधेरै प्रयोगकर्ताहरूले पहिचान नगरीकन प्रदर्शन गर्न विभिन्न तरिकाहरू खोजेका छन्। अब, यद्यपि यो फिचर पहिले नै इन्स्टाग्रामद्वारा हटाइएको थियो; हामी तपाईंलाई विभिन्न उपकरणहरूबाट स्क्रिनशटहरू कसरी बनाउने भनेर देखाउनेछौं।
Android उपकरणहरूमा स्क्रीनशटहरू
एन्ड्रोइड उपकरणहरूबाट स्क्रीनशटहरू बनाउनको लागि, तपाईंले आफ्नो स्वामित्वको स्मार्टफोन मोडेललाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ। यसको आधारमा, तपाईं कुन मोबाइल उपकरणमा स्क्रिनसट बनाउन सक्नुहुनेछ भनेर बुझ्नुहुनेछ। अर्को, हामी यो अपरेटिंग सिस्टम प्रयोग गर्ने सबै भन्दा राम्रो चिनिएका स्मार्टफोनहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर वर्णन गर्नेछौं।
यस्तो अवस्थामा यदि तपाईंसँग यस प्रकारको स्मार्टफोन छ, तपाईं पावर र भोल्यूम डाउन बटनमा जानुपर्नेछ; तिनीहरूलाई लगभग3सेकेन्ड र भोला को लागी प्रेस गर्नुहोस्! तपाईंसँग तपाईंको स्क्रीनशट हुनेछ।
यस विशेष केसमा, HTC उपकरणहरूको साथ तपाईले भोल्युम कम गर्नका लागि विकल्पहरू पत्ता लगाउनुपर्नेछ र स्क्रिन खोल्नुहोस्। स्क्रिनसट वा स्क्रिनसट प्राप्त गर्न एकै समयमा यी बटनहरू थिच्नुहोस्।
यदि यसको विपरितमा, तपाईंसँग सामसु range दायराबाट स्मार्टफोन छ; तपाईंले सुरु बटन र पावर बटन पत्ता लगाउनु पर्छ। धेरै जसो फोनहरूसँग, तपाईले उनीहरूलाई एकै समयमा थिच्नु पर्छ पर्दा स्क्रीनशट प्राप्त गर्न। यदि त्यहाँ सक्रिय इशारा कन्फिगरेसन छ भने, तपाईं स्क्रीनमा आफ्नो हात पछाडि स्लाइडिंग द्वारा स्क्रीनशट लिन सक्नुहुन्छ। अन्य अधिक उन्नत उपकरणहरूमा, पावर बटन थिच्नुहोस् र एकै समयमा भोल्युम घटाउनुहोस्।
Xperia उपकरणहरूको मामलामा, प्रक्रिया अलि परिवर्तन हुन्छ। यी उपकरणहरूमा, तपाईं केवल केही सेकेन्डको लागि पावर विकल्प खोज्न र होल्ड गर्नुपर्नेछ। पछि, एक पप-अप विन्डो धेरै विकल्पहरूको साथ खुल्नेछ, स्क्रिनसट लिनको लागि एउटा छनौट गर्नुहोस् र यो नै हो!
यी उपकरणहरूका लागि तपाईंले पावर र भोल्यूम डाउन बटनहरू पनि फेर्नुपर्दछ, एकै समयमा तिनीहरूलाई थिच्दै। अब, यदि तपाईंसँग बढि उन्नत उपकरण छ भने, तपाईंसँग आदेशहरू आफैंमा कन्फिगर गर्न विकल्प हुनेछ, तपाईंको स्क्रीनमा दुई पटक पर्चा थिच्दा स्क्रिनसटहरू प्राप्त गर्दा तपाईंको नकलहरू।
आईओएस उपकरणहरूमा स्क्रीनशटहरू
त्यस्तै तरिकामा, जसरी एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टमको माध्यमबाट स्क्रीनशटहरू बनाउने तरिकाहरू छन्, तिनीहरू आईओएस र आईफोन दायराका लागि पनि अवस्थित छन्। अब, यस उपकरणको माध्यमबाट स्क्रीनशटहरू लिनको लागि, तपाईंले आफैंको स्मार्टफोन मोडेललाई ध्यानमा राख्नु पर्नेछ।
सब भन्दा भर्खरका मोडेलहरूमा यो शक्ति र भोल्युम बटनहरू केही सेकेन्डमा थिच्न पर्याप्त हुन्छ। जे होस्, अझै मोडेलहरूले "होम बटन" प्रयोग गर्ने अवस्थामा मात्र तपाईले यो सेन्डर थिच्नुपर्नेछ, केही सेकेन्डको लागि पावर बटनको साथ।
इन्स्टाग्राममा स्क्रीनशटहरू कसले बनाउछ भनेर कसरी जान्ने?
जब इन्स्टाग्रामले चेतावनी दिन्छ यदि तपाईं स्क्रीनशट लिनुभयो भने, निजी सन्देशहरूको माध्यमबाट सूचनाको माध्यमबाट हो। अब, जैसा कि हामीले अगाडि उल्लेख गर्यौं, यदि तपाईंले अर्को प्रयोगकर्ताको सामग्री, वा कुराकानीको स्क्रिनसट लिनुभयो भने इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई सूचित गर्न रोकेको थियो। यो असंख्य गुनासोहरू प्रस्तुत भएको कारण यो नयाँ कार्यक्षमता बाहिर आयो।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि जब यो विकल्प यसको प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता सुरक्षित गर्न इन्स्टाग्राम प्लेटफर्म द्वारा लागू गरिएको थियो; धेरै विवाद उत्पन्न भयो। अब, सबैभन्दा चलाख, यो नयाँ उपायको आधारमा, उनीहरूको कम्प्युटरबाट स्क्रीनशट लिन रोज्नुभयो।
यसैले इन्स्टाग्रामले यो नयाँ अपडेट असफल गर्ने र अन्तत: यसलाई प्लेटफर्मबाट हटाउने निर्णय गर्यो। यस तरीकाले, तिनीहरूको प्रयोगकर्ताहरू उनीहरूको सामग्रीको गोपनीयतासँग बढी सन्तुष्ट र सन्तुष्ट हुनेछन्। अब, इन्स्टाग्राम एक प्लेटफर्म हो जुन लगातार अपडेट हुँदैछ, यसले आश्चर्यचकित गर्नु हुँदैन कि सामाजिक सञ्जालले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयताको सुरक्षा सम्बन्धित नयाँ सुविधाहरू लागू गर्दछ।
कम्प्युटरबाट स्क्रीनशट: पछाडि नछोड्नुहोस्!
जब तपाइँ यसलाई पढ्नुहुन्छ, परम्परागत स्क्रीनशटको वैकल्पिक विकल्प मध्ये एक, कम्प्युटरबाट स्क्रीनशट लिनु हो। यो छिटो र सरल विकल्प हो, जसले तपाईंलाई छवि वा कुनै सामग्री बचत गर्न अनुमति दिनेछ जुन तपाईंले इन्स्टाग्राममा हेर्नुहुन्छ। यसको एकमात्र नुकसान यो हो कि छविहरू कम गुणवत्तामा हुनेछन्।
उही तरिकामा, यो हाइलाइट गर्न सकिन्छ कि विन्डोज सबैभन्दा खुला र हाल प्रयोग गरिएको अपरेटिंग सिस्टमहरू मध्ये एक हो; यसका असंख्य फाइदाहरू छन्। यो यस्तो छ कि तपाईले धेरै उपकरणहरू भेट्टाउनुहुनेछ जुन तपाईंलाई आफ्नो कम्प्युटरलाई अनुकूलित गर्न अनुमति दिनेछ, साथसाथै सफ्टवेयर पनि जुन तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
एक साधारण तरिकामा स्क्रीनशट!
यदि तपाईंले याद गर्नुभएन भने पनि, धेरै जसो कम्प्युटरहरूमा स्क्रिनशटहरू लिनको लागि एक विशिष्ट बटन हुन्छ। कुञ्जी वा बटन को स्थान ब्राण्ड को निर्माताहरु मा निर्भर गर्दछ। यद्यपि यसको स्थान प्राय: कम्प्युटरको माथिल्लो दाहिने कुनामा हुन्छ।
यो विकल्प प्रयोग गर्नका लागि तपाईले सम्बन्धित कुञ्जी मात्र थिच्नु पर्छ; योसँग "ImpPnt Pet Sis" को नाम हुन्छ। एकचोटि तपाईंले यो थिच्नुभयो भने, एक स्क्रीनशट स्वत: उत्पन्न हुनेछ। अब यो पत्ता लगाउन तपाईले केवल "उपकरण" मेनूमा जानुपर्नेछ, "छविहरू" प्रविष्ट गर्नुहोस् र क्रमश: "स्क्रिनशट" मा क्लिक गर्नुहोस्।
उही तरिकामा, त्यहाँ अर्को विकल्प यो विकल्पको पक्षमा पनि छ; र, यदि तपाईं माथि दुई पटक क्लिक गर्नुभयो भने तपाईं एक विकल्प देख्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई तपाईंको स्क्रीनशट सम्पादन गर्न अनुमति दिनेछ। प्रस्ताव विकल्पहरू मध्ये यी हुन्: छवि क्रप गर्नुहोस्, यसमा आधारित भिडियो सिर्जना गर्नुहोस्, यसमा कोर्नुहोस्, अन्यमा।
अब, तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर मार्फत स्क्रिनसट लिन अन्य विकल्पहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यसलाई गुगल क्रोम एक्स्टेन्सनहरूको साथसाथै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, साथै तपाईंको कम्प्युटरमा कुञ्जी संयोजनहरूको प्रयोगको साथ।
यी संयोजनहरूको बीचमा हामी विन्डोज कुञ्जीलाई इम्प्रप पंतको साथ संयोजनको रूपमा फेला पार्दछौं, यस मार्फत तपाईं स्क्रीनशट बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई फाइलको रूपमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। उही तरीकामा, तपाई ईन्ट्री पंतको साथ संयोजनमा Alt कुञ्जीको संयोजन फेला पार्नुहुनेछ र यसले तपाईंलाई सक्रिय विन्डोको स्क्रीनशट मात्र प्रदर्शन गर्न विकल्प प्रदान गर्दछ।
इन्स्टाग्राममा कुन गीत सुन्ने
जब इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई भुक्तान गर्दछ